တိတိကျကျ ၊ မှန်မှန် ကန်ကန် ၊ မြန်မြန် ဆန်ဆန်လုပ်။ ~ Welcome From House Of wahgyi
Wednesday, November 21, 2007 wahgyi2comments
ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကြုံခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်တခုပါ။ အောက်တိုဘာလ ကုန်ခါနီးမှာ အိမ် ခဏပြန်သွားပါတယ်။ Nov ၂ ရက်နေ့ မှာ ရန်ကုန်ကနေပြန်လာတဲ့ အခါမှာ .........
ရန်ကုန်လေဆိပ်ရဲ့ Immegration Counter အရောက်မှာ Passport စာအုပ်နှင့် စာရွက်စာတမ်းများပြသောအခါ..... တာဝန်ကျ Immegration ၀န်ထမ်းက D-Form တောင်းပါတယ်။ D-Form ပြရာ ဘဏ်ချလံ စာရွက်တောင်းရာ မလိုအပ်ဘူးထင်ပြီး မယူလာခဲ့ ပါဟုပြောရာ ထိုဝန်ထမ်းမှ လိုတာပေါ့ ။ ပြန်ယူရန် အချိန်လဲ မရှိတော့ပါ။
ဟုတ်ကဲ့ .... ထောက်ခံစာလဲ ပြပါတယ် ၊ Copy ၂ စောင်လဲပေးခဲ့ပါတယ်။ အခုဒီမှာလဲ မူရင်းပါပါတယ် ဆိုပြီးစာရွက်ပြရာ ၊ ဒါဆိုရင် အရာရှိနဲ့ လိုက်တွေ့ပါ ဆိုပြီးခေါ်သွားပါတယ်။ အရာရှိရုံးခန်းသို့ သွားရာလမ်းတွင်၊ ထိုဝန်ထမ်းအား ၊ ၂၂ အောက်တိုဘာ က ပြန်လာတာပါ ၊ အဲ့ဒီနေ့က အ၀င်စာရင်းမှာကြည့် ကြည့် ပါ လို့ပြောရာ ၊ အ၀င်စာရင်းမှာ မတွေ့ဘူးလို့ ပြန်ပြောပါတယ်။ ဘုရား ဘုရား လူကိုယ်တိုင် ပြန်ရောက်ပြီး အခုပြန်ထွက် မှာတောင် အ၀င်စာရင်းမှာမတွေ့ ဘူးဆိုတော့ မစဉ်းစားတတ်တော့ပါဘူး။
Immegration Officer ဆီရောက်တော့ အစအဆုံးပြန်ရှင်းပြရ ပြန်ရော။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အ၀င်စာရင်းကိုရှာပရစေ ၊ ဆိုပြီးရှာတော့ ၂၂ ရက် မှာမတွေ့ ၊ ၂၃ ရက်ကိုကြည့် လိုက်တော့ ...... တွေ့ပါပြီ ၊ ဒီမှာပါလို့ ပြတော့ ၊ သူတို့ က ခင်ဗျားပြောတော့ ၂၂ ရက်ဆို အခုတော့ တလွဲ တဲ့ ။ မဟုတ်ရပါဘူး ပြန်လာတာ ၂၂ ရက်နေ့ သေချာပါတယ်။ မှတ်မှတ်ရရ အဲ့ဒီ မနက်ကမှ သံရုံးမှာ ထောက်ခံစာ ၀င်ယူခဲ့တာပါ။ Passport မှာလဲ Permitted to land Admitted 22 OCT 2007. လို့ တဆိပ်ထုထားပါတယ်။ နောက်တခါ စာရွက်တွေထုတ်ပြရပြန်ရော ၊ အဲ့ဒါနဲ့ သူတို့ အချင်းချင်း " ဒီကောင်တွေ သေသေချာချာမလုပ်ဘူး ၊ သောက်တလွဲပဲ " ဆိုပြောပြီး ထိုအရာရှိဆိုသူက ၊ ကဲ စာအုပ်မှာ Log no. ရေးပေးလိုက် လို့ပြောပါတယ်။
2 မှတ်ချက် ။:
November 22, 2007 at 12:17 PM Reply
May 22, 2011 at 8:19 PM Reply